Dad badan oo inaga mid ah isku shaandheyn ku telefoonada iyo marka aad sidaas samayso, waxaad u baahan tahay in aad nuqulka heshiiska weyn oo ah alaabtii. Haddii aad u yaabsan sida ay u gudbiyaan music ka android in Android, halkan waxaan faahfaahin doonaa saddex siyaabo kala duwan oo ay taasi dhici.
Oo keliya ma aha, tallaabooyinka taas oo aan ku qor doonaa kale oo uu saamaxayaa in aad ogaato sida ay u sawiro ka android in Android wareejiyo. Waxaad xor u tahay inaad doorato mid ka mid ah saddex dariiqo oo ba_x_sed baahidaada iyo doorashaada. Fikradda muhiimka ah waxay tahay si ay u fududaato in dadka u wadaagaan files ay warbaahinta ka mid ah aalad si kale.
1. Transfer Music iyo Photos la Mobiletrans Wondershare
2. Transfer muusig iyo sawiro badan Bluetooth
3. Transfer muusig iyo sawiro badan Wi-Fi
Bedelka Music iyo Photos la Mobiletrans Wondershare
Mobiletrans by Wondershare waa mid ka mid ah software ugu sareeya qiimeeyo kaas oo ka yimaadaa buuxiyey qaar ka mid ah qaababka ugu fiican.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah muuqaalada socodyada oo software this leeyahay in ay bixiyaan.
· Si sahlan loogu kala files kala duwan oo ka mid phone in kale. Nooca file taageeray ka mid ah Xiriirada, fariimaha qoraalka, Calendar, Photos, abuse Call, Video, Music
· Gurmad Quick xogta si fudud
· Waxa kale oo aad dib u soo ceshano karo xogta ka gurmad iCloud in telefoonka aad android iyadoo la isticmaalayo software this
· Waxa ay ka caawisaa in xogta si joogto ah tirtiro ah ee aad taleefan jir
· Waxa ay taageertaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah telefoonada kala duwan iyo nidaamyada hawlgalka badan iyo sidoo kale.
Markii aad raadinayso fudud iibsiga music android ama xataa haddii aad raadinayso inay ogaadaan sidii ay sawiro ka android in Android lagu wareejiyo, waa kuwan qaar ka mid ah tallaabooyinka fudud oo aad u baahan tahay in la raaco marka la isticmaalayo Wondershare Mobiletrans.
· Download software Wondershare Mobiletrans ee aad kombuutarka
· Marka aad ordi codsiga, waxaad ka heli doontaa fursado badan. Dooro 'phone inay kala iibsiga phone' ka mid ah liiska ku bixiyeen
· Hadda, xirmaan labada telefoonada si aad PC isticmaalaya fiilooyinka USB. Waxaad u baahan tahay in ay sugto software ah in la aqoonsado labada hindiseen
· Waxaa jira button uugu la isticmaalayo oo aad isticmaali karto in la beddelo il iyo caga lagu daydo
· Waxaad ka heli doontaa liiska content kala duwan oo aad nuqul karo
· Dooro Photos iyo Music ka mid ah liiska
· Riix 'Start Copy' habka content koobiyeynta bilowdo ka il inay caga
· Haddii aad rabto in ay nadiifiso aad telefoon u socoto, aad sax karaa sanduuqa sheegaya, "data cad ka hor inta nuqul '. Tani dhan xog jirta ee ka tirtiri doonaa, ka telefoonka caga
· Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso in labada telefoonada ay ku xidhan yihiin marka koobiyeynta yahay socda
· Marka koobiyeynta xogta ayaa guul u soo dhammaystay, markaas ka dib waxaad ka jari kartaa telefoonada iyo raaxaysan ka kooban guuriyeen in aad telefoon cusub
Kuwani waa tallaabooyinka fudud oo waa in la raacaa si loo xaqiijiyo in kala iibsiga si fudud loo fulin karo. Iyada oo ay tani habka kaliya oo loo baahan yahay in la isticmaalo ma aha, waxaa jira dhowr barnaamijyo kala duwan oo kale oo la doortay kartaa.
Transfer muusig iyo sawiro badan Bluetooth
Kala iibsiga Bluetooth weli hab kale oo caadi ah oo loo isticmaalo oo ay dad badan. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo music si sawirro android ama xataa, halkan waa tallaabooyinka degdeg ah aad u baahan tahay in la raaco.
· Qaado labada qalabka aad la.
· Daar Bluetooth labada hindiseen.
· Laga bilaabo qalabka diraha, calaamadee ee photos iyo miyuusig kuwaas oo aad rabto in aad nuqul.
· Waxaad dooran kartaa si ay u xusaan files kala duwan ee ka mid go by doorashada ikhtiyaarka Mark Dhowr.
· Marka aad soo xulay faylasha, markaas waxaad u baahan tahay in la garaaco Share / diro.
· Riix share / diri via Bluetooth.
· Haddii qalabka caga waxa ay mar horeba soo aadeen, waxay ku tusi doonaa in liiska qalab aad.
· Haddii qalabka caga aan la aadeen, hubi in qalab aad la arki karo si dhan.
· Waa in aad isku day ah in xubnuhu qalab aad.
· In la keeneen in doonaa inaad gasho code ka garab ee labada qalabka.
· Marka ay hindiseen ayaa ku aaday, doorato qalabka caga ka mid ah liiska aaladaha firfircoon ee liiska diraha ah.
· In la keeneen in doonaa in aad awood u aqbalo ee file soo socda.
· Riix haa iyo waxaad heli doontaa files ee aad telefoonka cusub.
Kuwani waa tallaabooyinka muhiimka ah in la raaco iibsiga fudud oo bilaash ah sawiro badan Bluetooth. Si kastaba ha ahaatee, geeddi-socodka, waxa aad u baahan tahay si aad u hubiso in labada telefoonada waxaa ka dhumanayay midba midka kale.
Bedelka muusig iyo sawiro badan Wi-Fi
Haddii aad rabto inaad la wadaagto warbaahinta faylasha aad ka badan Wi-Fi, halkan waa tallaabooyinka loo raaco.
· Waxaa muhiim ah in la hubiyo in labada qalabka waa in ay leeyihiin internet-ka oo waa in lagugu xiro u-Wi Fi.
· Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo Wi-Fi app kala iibsiga faylka aad kombuutarka.
· App wuxuu kuu bixin doonaa url ah oo aad feeraan kartaa web browser oo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan xasuusta gudaha iyo kaarka SD ah qalabka ku xiran.
· Marka aad leedahay xogta la heli karo la, waxaa aad u sahlan si ay u gudbiyaan files oo dhan sida aad si fudud u nuqul kara waxa ku qoran mid ka mid ah qalab si kale.
Kuwani waa qaar ka mid ah siyaabaha kala duwan kuwaas oo aad si fudud ku wareejin kartaa content aan mashaakil kasta. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah hababka, laakiin kuwa iska ilaalinaya hab nabad iyo ammaan ka dhigi waa hal dhibic si ay u xagliyaan Mobiletrans Wondershare sida ay shaki la'aan waa fursadaha ugu fiican. waxay bixisaa qaab ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo oo koobi ka mid kale oo ka kooban mid ka mid phone android.
> Resource > Android > saddex siyaabood si ay u gudbiyaan muusig iyo sawiro ka Android inay Android